Adeegyada: waraaqaha cilmi baarista iyo buugaagta | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Resources Cilmi baaris la daabacay
Boggan kheyraadka ah wuxuu bixiyaa liis ay ku qoran yihiin waraaqaha cilmi-baarista ee muhiimka ah iyo buugaag aan u tixraacno boggan. Waraaqaha cilmi-baadhista waxaa lagu daabacay joornaalada la-fayl-gareeyey, iyaga oo ka dhigaya ilo xog lagu kalsoonaan karo ah.
Waraaqaha waxay ku taxan yihiin sida xarfuhu isugu xigaan magaca qoraaga hogaamiyaha. Waxaan ku soo darnay qoraallo asal ah ama soo koobitaanno ah waraaqo, iyo sidoo kale talooyin ku saabsan sida loo helo warqadda oo dhan.
Haddii aad rabto caawimo dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka cilmi baaris, fadlan arag hagahan Helitaanka Cilmi-baarista.
Ahn HM, Chung HJ iyo Kim SH. Isbedelka Maskaxda ee Isbedelka Ciyaaraha Kadib Dhibaatooyinka Ciyaarta in Cyberpsychology, Habdhaqanka iyo Xiriirka Bulshada, 2015 Aug; 18 (8): 474-9. doi: 10.1089 / cyber.2015.0185.
Shakhsiyaadka cayaarta internetka waxay si xad dhaaf ah u muujiyaan falcelinta maskaxda ee maskaxda si ay u helaan calaamado la xiriira ciyaaraha. Daraasaddani waxa ay isku dayday in ay tijaabiso in fal-dambiyeedkan kor u kacay ee lagu arkay ciyaartoyda cayaarta ay sabab u tahay soo noqnoqoshada soo noqoshada ciyaaraha internet-ka. Ciyaalka da'yarta ah oo caafimaad qaba oo aan taariikh u lahayn cayaaraha internetka waa la shaqaaleeyay, waxaana loo baray inay ciyaaraan internetka internetka ee saacadaha 2 ee 5 maalmood oo isku xigga oo isku xiga. Laba kooxood oo loo xakameeyey ayaa loo isticmaalay: kooxda riwaayadaha ah, oo soo bandhigay riwaayad faneed khiyaali ah, iyo koox aan soo xaadirin, kuwaas oo aan helin hab-nidaameed. Dhamaan kaqeybgalayaashu waxay sameeyeen hawlo waxqabasho cuna oo leh cayaar, riwaayad, iyo calaamado dhexdhexaad ah oo ku yaal tarbiilka maskaxda, labadaba ka hor iyo ka dib kulannada soo-dhoweynta. Kooxda cayaaraha waxay muujiyeen falcelin kordhay calaamada ciyaaraha ee koontada horay loo yaqaan 'vortex frontort vortolor' (VLPFC). Heerka kordhinta firfircoonida VLPFC waxay si fiican u xidhiidhsan tahay kororka is-sheegista ee rabitaanka ciyaarta. Kooxda riwaayadku waxay muujiyeen jawaab celin dheeraad ah ee cuna-qabatinka iyaga oo ka jawaabaya soo bandhigista sheekooyinka riwaayadaha ee caudate, cingulate posterior, iyo precuneus. Natiijooyinka waxay muujinayaan in soo bandhigista ciyaaraha internetka ama riwaayadaha TV-ga ay kor u qaadaan jawaab celinta muuqaalka muuqaalka ee la xidhiidha soo-dhoweynta gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, qaababka sare u qaadista, waxay u muuqdaan kuwo kala duwan, waxayna ku xiran yihiin nooca warbaahinta ee khibrad leh. Sidee baa isbeddel ku yimaada gobollada mid waliba waxay gacan ka geystaan ​​sii socodsiinta xeeldheeraanta jirroolojiga ah ee ku dhawaaqaya daraasad joogto ah mustaqbalka.
Sheygani wuxuu ka danbeeyaa lacag bixinta halkan. Eeg Sideen ku heli karaa baaritaanka? talooyin ku saabsan helitaanka.
Baumeister RF iyo Tierney J. 2011 Dareemid: Dib u furida Xoogga ugu weyn ee Aadanaha Penguin Press. Buuggan waxaa la iibsan karaa halkan.
Beyens I, Vandenbosch L iyo Eggermont S Wiilasha Hore ee Wiilasha 'Saacadaha Cilmi-baarista Internetka Xiriirrada Waqtiga Xorriyadda, Diidmada Raadinta, iyo Waxqabadka Tacliinta in Wargeyska Early Adolescence, November 2015 vol. 35 maya. 8 1045-1068. (Caafimaadka)
Cilmi-baaris ayaa muujisay in dhallinyaradu si joogto ah u isticmaalaan sawir-gacmeedka "pornography". Daraasadan laba-dalbasho ee loogu talagalay in lagu tijaabiyo habka isdhexgalka ee wiilasha da'da yar (Mage = 14.10; N = 325) in (a) sharaxaad ka bixiso khatarta ficil-galinta internetka adoo eegaya cilaaqaadka la socdo wakhtigooda iyo raadinta dareenka, iyo (b) waxay sahamisaa natiijada suurtagalka ah ee ay la kulmayaan filimada internetka ee waxqabadkooda waxbarasho. Habka is-dhexgalka ee is-dhexgalka ayaa tilmaamaya waqtiyada loo yaqaan 'pubertal timing' iyo dareenka raadinta ee la saadaaliyay isticmaalka filimada internetka. Wiilasha leh masrax heer sare ah oo wiilal ah iyo wiilal badan oo aad u sarreeya oo raadinaya sawirro badan oo la isticmaalo. Intaa waxaa dheer, isticmaalka kororka ee filimada internetka ayaa hoos u dhigtay waxqabadka wiilasha '6 bilood ka dib. Dooddu waxay diiradda saartaa cawaaqibta mideeynta isku-dhafan ee cilmi-baarista mustaqbalka ee suuq-geynta internetka.
Buundooyinka AJ, Wosnitzer R, Scharrer E, Sun C, Liberman R Weerarka iyo dabeecada galmada ee fiidiyowyada filimka ugu badan ee iibiya: falanqaynta falanqaynta content in Rabshadaha ka dhanka ah Haweenka. 2010 Oct; 16 (10): 1065-85. doi: 10.1177 / 1077801210382866. (Caafimaadka)
Daraasaddan hadda socota waxay falanqeyneysaa waxyaabaha ku jira fiidiyowyada qaawan ee caanka ah, ujeeddooyinka ah in la cusbooneysiiyo sawirada gardarada, hoos u dhaca, iyo ku dhaqanka galmada iyo isbarbardhiga natiijooyinka daraasadda daraasadihii hore ee falanqaynta. Natiijooyinka waxay muujinayaan heerar sare oo gardarro ah oo ku saabsan sawir-gacmeedka af iyo adin ahaanba. 304 muuqaal oo la falanqeeyay, 88.2% waxaa kujiray gardarro jireed, gaar ahaan dharbaaxid, xanaaq, iyo dharbaaxo, halka 48.7% muuqaaladu ay kujireen gardaro af ah, oo ay ugu horeyso magac u yeerid. Dembiilayaasha gardarrada badiyaa waxay ahaayeen rag, halka bartilmaameedyada gardarradu ay ahaayeen dumar aad u tiro badan. Bartilmaameedyada badiyaa waxay muujiyeen raaxo ama waxay uga jawaabeen si dhexdhexaad ah gardarada.
Cheng S, Ma J iyo Missari S Saameynta isticmaalka internetka ee qaangaarayaasha 'jacaylka ugu horeeya iyo jinsiga ee Taiwan in Socdaalka Caalamiga ah July 2014, vol. 29, maya. 4, pp 324-347. doi: 10.1177 / 0268580914538084. (Caafimaadka)
Isticmaalka internetka iyo isku-xirka dhijitaalka ah ayaa sii kordhaya qayb ka mid ah qaybaha bulshada ee qaangaarka. Daraasadani waxa ay baareysaa saamaynta isticmaalka Internetka ee Taiwan laba ka mid ah dabeecadaha bulshanimo ee muhiimka ah: xiriirka koowaad ee jacaylka iyo furitaanka galmada. Isticmaalka macluumaadka Mashruuca Dhalinyarada ee Taiwan (TYP), 2000-2009, Natiijooyinka falanqaynta taariikhda dhacdooyinka waxay soo jeedinayaan in isticmaalka internetka ee qaan-gaar ah ee ujeedada waxbarashadu ay yareyso heerarka ah xiriirka koowaad ee jaceylka iyo furitaanka galmada ee qaan-gaar ah, halka isticmaalka internetka shabakadda bulshada, booqashada makhaayadaha internetka, iyo bogagga shabakadaha internetka ee pornographic waxay kordhiyaan qiimaha. Waxaa jira farqi jinsi ah oo saameynaya hawlaha Internet-ka ee khibradaha khibradda leh ee qaangaarka ah. Falanqaynta qadarinta ayaa sidoo kale muujinaya in hawlaha internetku ay sidoo kale saameeyaan suurtagalnimada in dhalinyaradu ay leeyihiin galmada ugu horeysa kahor inta aan xiriir la yeelan rikoodhka koowaad. Saameynta natiijooyinkan waxaa lagu soo gabagabeynayaa gabagabada.
Sheygani wuxuu ka danbeeyaa lacag bixinta halkan. Eeg Sideen ku heli karaa baaritaanka? wixii talo bixin ah ee ku saabsan marin u helka. ”> halkan.
Dunkley, Victoria 2015 Dib-u-deji Maskaxda Cunugaaga: Qorshe Afar-Todobaad ah oo lagu joojinayo Kala-daadashada, Kordhinta Darajooyinka, iyo Kordhinta Xirfadaha Bulshada adoo ka laabanaya Saamaynta Baarista Elektaroonigga ah Warqad qoraal ah. Maktabadda Cusub ee New World ISBN-10: 1608682846
Kordhinta tirooyinka waalidku ku raaxaystaan ​​carruurta u dhaqma sabab la'aan. Qaar badan oo ka mid ah caruurtan ayaa lagu ogaadey ADHD, laba-cirifood, ama xanuunka autism-ka. Waxay markaa daaweynayaan inta badan saboolka iyo natiijooyinka soo-iftiimaya. Victoria Dunckley waxay ku takhasustay inay la shaqeyso carruurta iyo qoysaska ku fashilmay in ay ka jawaab celiyaan daaweyntii hore ayna hormarisay barnaamij cusub. Shaqadeeda iyada oo ka badan carruurta 500, dhalinyarada, iyo dhalinyarada qaangaarka ah ee lagu soo ogaado xanuunka dhimirka, 80 boqolkiiba waxay muujiyeen barnaamijka afar toddobaad ee lagu soo bandhigay halkan. Qiimeenta interactive, oo ay ku jiraan ciyaaraha fiidiyowga, laptops, telefoonada gacanta, iyo kiniiniyada oo kicinaya habka xanuunka ilmaha. Inkasta oo mid ka mid ah adduunka maanta ku xiran ay gabi ahaanba iska xakameyn karaan xayawaanka elektaroonigga ah, Dunckley waxay muujineysaa sida ugu nugul naga dhexdhexaadin karo, waana in laga ilaaliyaa saameyntooda waxyeelada leh
Gouin JP, Carter S, Pournajafi-Nazarlooc H, Glaser R, Malarkey WB, Loving TJ, Stowell J, iyo Kiecolt-Glaser JK Dabeecadda guurka, Oxytocin, Vasopressin, iyo bogsashada dhaawaca in Psychoneuroendocrinology. 2010 August; 35 (7): 1082-1090. doi: 10.1016 / j.psyneuen.2010.01.009. (Xiriirrada)
Daraasaadka xayawaanku waxay ku dheehan yihiin oxytocin iyo vasopressin oo ku saabsan xidhiidh bulsho, jawaabaha culeyska nafsaaniga, iyo bogsashada dhaawaca. Bini-aadanka, oxytocin-ta endogenous iyo dareenka vasopressin ayaa leh fikrado ku saabsan tayada xiriirka, dabeecadaha guurka, iyo jawaabaha cadaadiska nafsaaniga. Si loo baadho xiriirka ka dhaxeeya dabeecada guurka, oxytocin, vasopressin, iyo bogsashada nabarka, iyo si loo go'aamiyo sifooyinka shakhsiyaadka leh heerarka neuropeptide ee ugu sarreeya, xaaska 37 ayaa la dhigey booqasho saacad ah 24 qaybta cilmi baarista ee isbitaalka. Ka dib markii boogaha yaryar ee balaastig yar yar lagu abuuray gacmahooda, lamaanayaashu waxay ka qaybqaadeen hawlgalka isdhexgalka bulshada ee isdhexgalka. Meelaha blaves waxaa la kormeeray maalin kasta ka dib markii loo baahdo si loo qiimeeyo xawaaraha dayactirka. Shaybaarka dhiigga waxaa loo soo ururiyey oxytocin, vasopressin, iyo baaritaanka cyokokine. Heerarka oxytocin ee sare waxay la xiriiraan dabeecadaha isgaadhsiinta ee habboon inta lagu jiro hawlgalka dhexdhexaadinta. Intaas waxaa sii dheer, shakhsiyaadka ku jira quudaha sare ee quutiliga ah ee boogaha ayaa si dhakhso ah uga bogsaday kaqeybgalayaasha qowmiyadaha yar yar ee oxytocin. Heerarka sare ee dheecaanku waxay la xiriiraan dhaqdhaqaaqa isgaadhsiinta oo yar iyo wax soo saarka qanjirka 'necrosis factor'. Intaa waxaa dheer, haweenka ku jira quinti-ka sare ee vasopressin waxay bogsadeen nabarrada tijaabada ah si ka dhakhso badan saamiga saamiga. Xogtaasi waxay xaqiijineysaa oo ay kordhinaysaa caddaynta hore ee la xidhiidha oxytocin iyo vasopressin ee labada lamaane 'dabeecadaha isgaadhsiinta xun iyo diidmada, iyo sidoo kale bixiyaan caddeyn dheeraad ah oo ku saabsan kaalintooda natiijada caafimaad ee muhiimka ah, bogsashada dhaawaca.
Waraaq buuxa ayaa loo heli karaa si aad u soo iibsato lacag la'aan halkan.
Johnson PM iyo Kenny PJ Abaalmarinta Faa'iidada La'aanta iyo Cunnooyinka Dabacsan ee Lakabka Cunugga: Doorka Dopamine D2 Reseptors in Nature Neuroscience. 2010 May; 13 (5): 635-641. Loo soo daabacay internetka 2010 Mar 28. doi: 10.1038 / nn.2519
Waxaan ogaanay in horumarinta buurnaanta ay la socotey soo bixitaanka maskaxda si tartiib tartiib ah loo abaalmariyo maskaxda. Isbedelada noocaas ah ee abaalmarinta gurigaostasis oo ay sababtay kookayn ama heroin ayaa loo tixgeliyaa inay tahay arrin muhiim ah oo ku-ool ah ka-gudubka si aan caadi ahayn u-qaadashada daroogada. Sidaa awgeed, waxaan ogaanay dabeecada quudinta sida compoteive-sida oo ku jirta jiirka, laakiin aan la cunin jiirka, oo lagu qiyaaso isticmaalka cuntada la kariyey ee udubdhexaadka ah oo u adkaysatay inay carqaladeeyaan kicin kicin leh. Diyarajiyeyaasha dopamine D2 D2 (D2R) ayaa hoos u dhigay jiirka jeexjeexa, oo la mid ah warbixinnadii hore ee daroogooyinka daroogada. Waxaa intaa dheer, garaacista lentivirus-dhexdhexaadka ah ee DXNUMXR si dhakhso ah u kordhay horumarinta macaamiisha abaal-marinta-la midka ah iyo bilawga cunnaanta cunta ee rabta cunnida oo la raadin karo helitaanka cuntada dufanka badan leh. Xogtaasi waxay muujineysaa in cunno badan oo la kariyey ay ku dhalato ciyaal-kufsi - sida jawaabaha neuroadaptive ee maskaxda ku wareega wareegga iyo in uu kobciyo cunnida cunta. Nidaamka deeqda caamka ah ee caadiga ah ayaa laga yaabaa inuu hoos yimaado cayilka iyo daroogada daroogada.
Maqaalkani waa bilaash halkan.
Johnson ZV iyo Young LJ Nidaamka neurobiological ee xiriirka bulshada iyo isku-xidhka labada is-haysta ee Xogta Hadda in Sayniska Dhaqanka. 2015 Jun; 3: 38-44. doi: 10.1016 / j.cobeha.2015.01.009. (Xiriirrada)
Noocyada waxay kobciyeen dabeecadaha kala duwan ee bulsheed iyo istiraatiijiyadaha isweydaarsiga ee ka jawaab celinta awoodda xulashada ee deegaankooda. Inkasta oo miisaaniyaddu ay tahay istiraatiijiyadda mawduucyada istiraatiijiga ah ee cirifka intooda ugu badan, habka isdhexgalka ee hababka isku dhafka ee monogamous ayaa marar badan ku dhacay jadwalka fog. Habdhaqan-camalladeedka waxaa loo maleynayaa in ay fududeeyeen kartida neurobiological si ay u sameeyaan una ilaaliyaan lifaaqyada bulshada, ama labada lamaane, oo la wadaago lamaane. Nidaamka neerfaha ee dabeecadda xidhiidhka labadaba waxaa lagu baaray inta badan qaniinyada Microtine, oo muujiya ururo kala duwan. Daraasaddan waxay muujisay dariiqooyinka dopamine mesolimbic, neuropeptides (oxytocin iyo vasopressin), iyo nidaamyada kale ee neerfayaasha oo ah arrimo muhiim u ah samaynta, dayactirka, iyo muujinta curaarta lamaanaha.
Warqad buuxda ayaa laga heli karaa bilaash bilaash ah halkan.
Kastbom, AA, Sydsjö G, Bladh M, Priebe G, iyo Svedin CG Marka ugu horeysa ee galmada ka hor da'da 14 waxay u horseedaa caafimaadka nafsaaniga ah ee saboolka ah iyo dabeecadaha khatarta ah nolosha dambe in Acta Pediatrica, Volume 104, Issue 1, boggaga 91-100, Janaayo 2015. DOI: 10.1111 / apa.12803. (Caafimaadka)
Ujeeddo: Daraasadani waxay baaritaan ku samaysay xiriirka ka dhaxeeya mudnaanta galmada ka hor intaan 14 da 'sano iyo bulsho-bulsheed, khibrad jinsi, caafimaad, waayo-aragnimo cunsurinimada caruurta iyo dabeecadda ah 18 sano jir.
Hababka: Tusaaleyaal 3432 oo ah waayeelka dugsiyada sare ee iswiidhishka ah waxay dhammaystireen sahan ku saabsan galmada, caafimaadka iyo xadgudubka da'da 18.
Natiijooyinka: Bilowga hore ayaa si wanaagsan ula xariira dabeecadaha khatarta leh, sida tirada lamaanayaasha, khibradda ku saabsan galmada afka iyo dabada, dabeecadaha caafimaadka, sida sigaarka, isticmaalka mukhaadaraadka iyo isticmaalka khamriga, iyo dabeecadaha lidka ku ah, sida rabshad, been, ka cararaya guriga. Gabdhaha hore ee galmada hore u lahaa khibrad aad u badan oo ah xadgudub galmo. Wiilasha leh arooska hore ee galmada waxay u badan tahay inay dareemaan dareen daciif ah, isku-kalsooni hoose iyo caafimaadka maskaxda ee saboolka ah, oo ay la socdaan waayo-aragnimada galmada, iibinta jinsiga iyo xadgudub jireed. Noocyo farsamo oo badan oo farsamo ayaa muujiyay in tiro badan oo falalka qunyar-socodka ah iyo dabeecadaha caafimaadku ay ahaayeen kuwo aad u muhiim ah, laakiin bilowga hore ee galmada ma kordhin khatarta calaamadaha cudurka dhimirta, hoos u dhigida dareenka ama dareenka hooseeya ee isku xirnaanta 18 da'da.
Gabagabo: Bilawga hore ee galmada waxay la xiriirtay dabeecadaha dhibaatada ah inta lagu guda jiro qaangaarka dambe, iyo jilicsanaantan waxay u baahan tahay feejignaanta waalidiinta iyo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka.
Qoraal dhamaystiran ee maqaalkani waa mid la heli karo halkan.
Ko CH, Liu TL, Wang PW, Chen CS, Yen CF iyo Yen JY Baaxad-darrida niyad-jabka, nacaybka, iyo walwalka bulshada ee habka loo isticmaalo daroogada internetka ee dhallinyarta: daraasad mustaqbalka ah in Maskaxiyan maskaxeed oo dhammeystiran Volume 55, Issue 6, Bogagga 1377-1384. Epub 2014 May 17. doi: 10.1016 / j.comppsych.2014.05.003. (Caafimaadka)
TALAABOOYINKA: Dadka qaangaarka ah ee adduunka ku nool, isticmaalka internetku waa mid aad u baaxad weyn waxaana badanaa la kulma niyad jabka, cadaawada, iyo walwalka bulshada ee dhalinyarada. Daraasadani waxaa loogu talagalay in lagu qiimeeyo sii xumeynta niyad-jabka, nacaybka, iyo walwalka bulshada inta lagu jiro qaadashada khamri-galinta internetka ama ka-soocitaanka isticmaalka internetka ee dhallinyarada.
DAWEYN: Daraasadani waxay qortey 2,293 dhallinyaradu fasalka 7 si ay u qiimeeyaan niyad-jabka, cadaawada, welwelka bulshada iyo isticmaalka internetka. Qiimayn isku mid ah ayaa la soo celiyay hal sano ka dib. Kooxda cakiran waxaa lagu qeexay maadooyinka lagu tilmaamay inay yihiin kuwa aan lagu qanacsaneyn qiimeynta kowaad iyo sidii loo qiimeeyey qiimeynta labaad. Kooxda ka-xayuubinta waxaa lagu qeexay maaddooyinka lagu tilmaamayo inay yihiin kuwo la qabatimay qiimeyntii ugu horeysay iyo sida aan loo qadarin qiimeynta labaad.
Natiijooyinka: Kooxda cudurka jiraa waxay muujiyeen niyadjab iyo cadaawinimo ka badan kuwa aan takoorka ahayn iyo saameynta niyad-jabka waxay ka xoog badnaayeen gabdhaha qaangaarka ah. Dheeraad ah, kooxda kooxdu waxay muujisay niyadjab, dacaayad, iyo walaac bulsho oo ka badan kooxda ka hortagga maan-dooriyaha.
XUSUUS: Niyadjab iyo cadaawinimo ayaa ka sii daraya habka mukhadaraadka ee internetka ee dhallinyarada. Farogelinta isticmaalka internetka waa in la bixiyaa si looga hortago saameynta xun ee caafimaadka maskaxda. Niyadjab, cadaawad, iyo walaac bulsheed ayaa hoos u dhacay geeddi-socodka rayi-siinta. Waxay soo jeedinaysaa in cawaaqibyada liita ay noqdaan kuwo la beddeli karo haddii isticmaalka maandooriyaha ee internetka lagu soo dari karo muddo gaaban.
Kühn, S iyo Gallinat J Qaabdhismeedka Maskaxda iyo Isku-xirnaanta Hawlaha Isku-xidhan ee Lagu Caawinayo Sawir-gacmeedka Lahaanshaha: Maskaxda ku jirta Porn in Jaamicadda Maskaxda. 2014; 71(7):827-834. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.93.
Muhiimada: Maadaama muraayada sawirku ka muuqato internetka, helitaanka, awood-u-lahaanshaha, iyo qarsoodiga ah ee isticmaalka dareenka muuqaalka jinsiga ayaa kor u kacay ayna soo jiidatay malaayiin qof. Iyadoo lagu saleynayo malaha in isticmaalka pornography uu u eg yahay dabeecad abaal-marin ah, dabeecad cusub oo raadinaysa, iyo habdhaqan-takoorka, waxaanu sharxaynaa isbeddelka shabakada horudhaca ah ee dadka isticmaala.
Ujeeddo: Si loo ogaado in isticmaalka pornography ee soo noqnoqota ay la xiriirto shabakada horudhaca ah.
Daraasadda, Dejinta, iyo Ka Qaybqaatayaasha Daraasad lagu sameeyey machadka Max Planck ee Horumarinta Aadanaha ee Berlin, Jarmalka, 64 ragga waaweyn ee caafimaadka ah oo ka hadlaya siyaabo kala duwan oo loo isticmaalo suuqyada ayaa isticmaalay saacado badan oo la isticmaalo pornography. Isticmaalka sawir-gacmeedka ayaa la xiriiray qaabdhismeedka neural, hawlgelinta hawlaha la xidhiidha, iyo xiriirinta nasashada ee hawl-qabadka.
Natiijooyinka Ugu Muhiimsan iyo Cabbiraadka Miisaanka maskaxda ee maskaxda ayaa lagu qiyaasey muraayad ku salaysan voxel-ka iyo isugeynta xiriirinta hawlaha gobolka oo lagu qiyaasay sawirada sawir-baadhista 3-T.
Natiijooyinka Waxaan ka helnay xiriir aan fiicnayn oo udhaxeeya saacadaha qaawan ee la soo sheegay usbuucii iyo mugga miisaanka cawate ee saxda ah (P <.001, waxaa lagu saxay isbarbardhigyo badan) iyo sidoo kale waxqabad firfircoon inta lagu gudajiro muuqaalka falcelinta galmada ee bidixda bidix ( P <.001). Isku xirnaanta shaqada ee caudate-ka saxda ah ee kiliyaha hore ee bidix ayaa si xun ula xiriiray saacadaha isticmaalka filimada.
Gabagabada iyo Ku-oolka ah Urur-diidmo xumo oo la xidhiidha isticmaalka pornography ee is-dhaafsan oo leh mugga saxda ah (caudate), kumbiyuutarka (bidamen) dhaqdhaqaaqa inta lagu jiro fal-dambiyeedka dabiiciga ah, iyo xiriirka hoose ee farsamaynta coodsiga saxda ah ee koontada hore ee bidixda ee bidixda ah ayaa ka tarjumi kara isbeddelka neeriga baqshiinka sababtoo ah kicinta xooggan ee nidaamka abaal-marinta, oo ay la socoto qaab-hoosaad hoose oo hoos-u-dhac ah oo ka mid ah goobaha xaafadaha. Haddii kale, waxay noqon kartaa shardi ah in la isticmaalo suuqyada isticmaalka badan ee abaalmarinta.
Lambert NM, Negash S, Stillman TF, Olmstead SB, iyo Fincham FD Jacayl Aan Waarayn: Cunista Pornography iyo Daciifnimada Ballanqaadka Qofka Wadaagga ah ee Jacaylka ah in Wargeyska cilmi nafsiga ee cilmiga bulshada iyo caafimaadka: Vol. 31, No. 4, pp. 410-438, 2012. doi: 10.1521 / jscp.2012.31.4.410. (Caafimaadka)
Waxaan baarnay haddii isticmaalka pornography ay saameyn ku yeeshaan xidhiidhada jacaylka, iyadoo rajada ah in heerarka sare ee isticmaalka pornography ay ku habboontahay in ay u dhiganto ballanqaad aan hoos u dhicin ee xiriirrada da 'yar ee jacaylka qaangaarka ah. Waxbarashada 1 (n = 367) waxay ogaatay in isticmaalka sigaarka oo sareeya uu la xiriiro heerarka hoose, iyo Study 2 (n = 34) ayaa ku celiyay natiijadan iyadoo la adeegsanayo xogta aragtida. Ka qaybgalayaasha 3 (n = 20) ayaa si aan kala sooc lahayn loo xilsaaray inay ka fogaadaan daaweynta filimmada ama xakamaynta is-xakamaynta. Kuwa sii waday isticmaalka pornography waxay muujiyeen heerar hoose oo ballanqaad ah oo ka duwan ka qaybgalayaasha kantaroolka. Daraasadda 4 (n = 67), kaqeybgalayaasha oo isticmaalaya heerar sare oo ah pornography ayaa ku biiray qaar badan oo lala yeeshay lammaane firfircoon intii lagu jiray wada-hadal online ah. Daraasad 5 (n = 240) wuxuu ogaaday in isticmaalka pornography uu si wanaagsan ula xiriiray gaalnimada oo ururkani wuxuu dhexdhexaadiyey ballanqaad. Guud ahaan, natiijooyinka joogtada ah ee natiijooyinka waxaa lagu ogaaday iyada oo la adeegsanayo habab kala duwan oo ay ku jiraan iskudhaf (1), indho-indhayn (Study 2), tijaabo ah (Study 3), iyo habdhaqanka (Studies 4 iyo 5).
Levin ME, Lillis J iyo Hayes SC Goorma waa sawir-gacmeedka sawir-gacmeedka ah Baadhitaanka Kaalinta Xeeldheer ee Ka Fogaanshaha Khibradda leh in Maandooriyaha Galmada & Ku Xadgudubka: Joornaalka Daaweynta & Ka Hortagga. Volume 19, Issue 3, 2012, boggaga 168-180, DOI: 10.1080 / 10720162.2012.657150. (Caafimaadka)
Muuqaalka sawir-gacmeedka ee internetka ayaa caadi ahaan caadi ahaan ragga ragga ah, laakiin ma cadda in iyo haddii cidda aragtidaas ay tahay dhibaato. Mid ka mid ah geeddi-socodka suurtogalka ah ee laga yaabo in ay ka soo horjeeddo in aragtidu ay tahay dhibaato waa iska ilaalin khibrad leh: raadinta in la yareeyo qaabka, marxaladda, ama dareenka xaaladaha khibradaha gaarka ah xitaa marka ay sidaas sameeyaan waxay keenaan waxyeelo anshaxeed. Daraasaddan imtixaanka ah waxay baaris ku samaysay xiriirka ladagaalanka internetka ee ka soo horjeeda iyo ka fogaanshaha khibradaha nafsaaniga ah (niyadjab, walaac, walaac, shaqo bulsho, iyo dhibaatooyin la xidhiidha daawashada) iyada oo la adeegsanayo sahan isweydaaris online ah oo lagu sameeyay maaddo aan daaweyn ahayn 157 kuleejka jaamacadda. Natiijooyinka waxay muujinayaan in inta badan daawashada ay si aad ah ula xiriirto isbeddel kasta oo nafsaani ah, sida in daaweyn badani ay la xiriirto dhibaatooyin waaweyn. Waxaa intaa dheer, ka fogaansho waayo-aragnimo leh ayaa dhexdhexaadiyay xiriirka u dhexeeya daaweynta iyo laba nafsaani-bulshadeed, sida daawashada welwelka iyo dhibaatooyinka la xidhiidha aragtida kaliya ee ka-qaybgalayaasha ee heerarka daaweynta ee ka fogaansho khibrad leh. Natiijooyinkan waxaa lagu falanqeeyaa qaabka cilmi-baarista ee ka hortagga khibradaha iyo hababka daaweynta ee lagu beegsanayo geeddi-socodkan.
Jacayl T, Laier C, Brand M, Hatch L iyo Hajela R Naasnuujinta Khadka Asaliga ah ee Internetka in Sayniska Dhaqanka 2015, 5 (3), 388-433; doi: 10.3390 / bs5030388. (Caafimaadka)
Qaar badani waxay aqoonsadaan in dabeecado badani ay saameyn ku yeelan karaan wareegga abaal-marinta ee maskaxda bini-aadamka taasoo keenaysa in lumiyo xakamaynta iyo astaamaha kale ee takooridda ugu yaraan shakhsiyaadka qaarkood. Marka laga hadlayo isticmaalka internetka, cilmi baarista neerosku waxay taageertaa malaha in geeddi-socodka neerfiga ee hooseeya uu la mid yahay walxaha maandooriyaha. Ururka cilmi-nafsiga ee Maraykanka (APA) wuxuu aqoonsaday mid ka mid ah habdhaqanka internetka ee la xidhiidha, ciyaaraha internetka, oo ah khibrad khayaali ah oo loo baahan yahay in la sii daayo daraasad dheeraad ah, ee ku saabsan 2013 dib-u-eegista Buugyaraha iyo Tilmaamaha. Dabeecadaha kale ee la xidhiidha internetka, sida, isticmaalka suuqyada internetka, lama daboolin. Dib-u-eegistaan ​​gudaheeda, waxaan soo bandhignaa fikradaha la soo jeediyay ee ku-takri-falka ah ee la soo jeediyey iyo soo-bandhig guud oo ku saabsan daraasadaha cilmi-baarista neuroskisa ee ku-xidhnaanshaha internetka iyo khalkhalka ciyaaraha Internet-ka. Waxaa intaa dheer, waxaan dib u eegnay suugaanta suugaaneed ee akhbaaraadka qatarta ah ee qaawan ee internetka oo ku xiran natiijooyinka mujtamaca maandooriyaha. Dib-u-eegista waxay keenaysaa in gabagabada internetka ee foojignaanta sawirku ay ku habboon tahay qaab-dhismeedka mukhadaraadka iyo saamiyo la mid ah hababka aasaasiga ah ee macaamiisha maandooriyaha. Si wadajir ah ula socdo daraasadaha ku saabsan isticmaalka internetka iyo khalkhalka ciyaaraha Internetka waxaan arki karnaa cadeyn xooggan oo loogu talagalay in la tixgeliyo dabeecadaha khatarta ah ee internetka sida takoorka akhlaaqda. Cilmi-baarista mustaqbalka waxay u baahan tahay in ay wax ka qabato bal in ay jiraan farqi gaar ah oo u dhaxeeya walxaha iyo habdhaqanka aadaabta.
Sheygan waxaa lagu heli karaa bilaash bilaash ah halkan.
Luqadda SS, Nelson LJ, Poulsen FO, Willoughby BJ Isbedelada Dareenka Galmada Dadka Waaweyn in Dadka qaangaarka ah ee soo kordhay. 2013 Sep 1; 1 (3): 185-95. (Guriga)
Daraasado farabadan ayaa muujiyay sida xakamaynta ay u saameynayso shakhsiyaadka ku jira carruurnimada iyo qaangaarka; Si kastaba ha noqotee, wax yar ayaa laga ogyahay waxyeellada saameynta ku yeelan karta qaangaarka soo baxaya. Daraasadani waxay ka hadashay sida xakameyntu ula xiriirto dabeecadaha galmada iyo dabeecadaha ragga iyo haweenka qaangaarka ah ee soo kordhay. Ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ahaa ardayda 717 oo ka kala yimid afar goobood oo kuleejo ah oo ku yaal Maraykanka, kuwaas oo intooda badani haween ah (69%), Maraykanka Ameerika (69%), aan guursan (100%), iyo ku noolaanshaha dibedda waalidkooda (90%). Natiijooyinka waxay soo jeediyeen in xakamaynta ay si wacan ula xiriirto habdhaqanka galmada (oo muujinaysa aragti dheer oo dheellitiran) oo ragga ah, inkastoo xishoodka uu si xun ula xiriiray habdhaqanka galmada ee haweenka. Xoogsheegashadu waxay si wacan ula xiriirtay dabeecadaha jinsiga oo keliya oo ah masturbo iyo isticmaalka pornography ee ragga. Daacadnimadu sidoo kale waxay si xun ula xiriirtay dabeecadaha jinsiga ee isku-dabiiciga ah (guurka iyo kuwa aan is guursan) iyo tirada lamaanayaasha nolosha ee haweenka. Saameynta natiijooyinkan waa la falanqeeyay.
Maddox AM, Rhoades GK, Markman HJ Eegida Shaybaarka Jinsiga-Maqalka Kaliya ama Wadajir: Ururada leh Tayada Xiriirka in Arch Sex Behav. 2011 Apr; 40(2):441–8.
Daraasadani waxay baartey ururada udhaxeeya arimaha jinsiga-sifaha (SEM) iyo xiriirka ka dhexeeya shaandho aan rasmi ahayn ee 1291 shakhsiyaadka aan is qabin ee xiriirrada jacaylka. Ragga intooda badan (76.8%) marka loo eego haweenka (31.6%) waxay sheegeen in ay SEM-kooda u arkaan, laakiin ku dhawaad ​​kala bar ragga iyo haweenka labaduba waxay soo sheegeen inay mararka qaar daawanayaan SEM-ta lammaanahooda (44.8%). Qiyaasaha isgaadhsiinta, hagaajinta xiriirka, ballanqaadka, qanacsanaanta galmada, iyo gaalnimada ayaa la baarey. Shakhsiyaadka aan waligood eegin SEM waxay tayada sare ee tayada xiriirka ka muujiyeen dhammaan kuwa indhawareeya kuwa ka soo muuqday SEM kaligeed. Kuwa u muuqda SEM waxay la wadaagaan shurakadooda kaliya waxay muujiyeen in badan oo kalsooni ah iyo qanacsanaan galmo ka sarreeya kuwa ka muuqda SEM kaligii. Farqiga kaliya ee u dhexeeya kuwa aan waligood eegin SEM iyo kuwa ay u arkeen oo kaliya la shaqeeyayaashooda waxay ahayd in kuwa aan marnaba u muuqan inay leeyihiin heerar hoose oo gaal ah. Saameynta baaritaanka mustaqbalka ee aagga iyo sidoo kale daawaynta jinsiga iyo daaweynta lamaanaha ayaa lagala hadlayaa.
Negash S, Sheppard NV, Lambert NM iyo Fincham FD Ganacsiga Later Dib U Qalitaan Loogu Talogalay Akhbaar Dheeraad ah: Isticmaalka Sawir-Maskaxeedka iyo Dib-u-dhigista Lacagta in Wargeyska Cilmi-baarista Galmada, 2015 Aug 25: 1-12. [Epub ka hor daabacan]. (Caafimaadka)
Filimmada qaawan ee internetka waa warshad balaayiin doolar ku shaqeysa oo si isa soo taraysa u soo kordhay. Dib-u-dhigista dib-u-dhigga waxay ku lug leedahay qiimeyn ballaaran, abaalmarinno dambe oo lagu beddelayo abaalmarinno yaryar oo degdeg ah. Cusbooneysiinta joogtada ah iyo mudnaanta dhiirrigelinta galmada sida abaalmarinta dabiiciga ah gaar ahaan xoogga leh waxay ka dhigeysaa filimada internetka mid firfircoon oo ka mid ah nidaamka abaalmarinta maskaxda, taas oo saameyn ku yeelanaysa geedi socodka go'aan qaadashada. Iyada oo ku saleysan daraasadaha fikradaha ee cilmu-nafsiga iyo dhaqaalaha, laba daraasadood ayaa tijaabiyey mala-awaalka ah in cunista filimada internetka ay la xiriirto heerarka sare ee dhimista dhimista. Daraasadda 1 waxay isticmaashay naqshad dheer. Kaqeybgalayaashu waxay dhameystireen su'aalo waydiinta filimada iyo hawsha dhimista dib u dhaca Waqtiga 1 ka dibna markale afar toddobaad kadib. Kaqeybgalayaasha ka warbixinaya isticmaalka filimada qaawan ee bilowga ah waxay muujiyeen sicir-dhimis dib-u-dhac sare Waqtiga 2, iyagoo xakameynaya dhimista daahitaanka hore Daraasadda 2 ayaa lagu tijaabiyay sababi iyada oo la adeegsanayo naqshad tijaabo ah. Kaqeybgalayaasha waxaa si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyey inay ka fogaadaan midkoodna cunnooyinka ay jecel yihiin ama filimada qaawan muddo saddex toddobaad ah. Kaqeybgalayaasha ka aamusay filimada qaawan waxay adeegsadeen qiimo dhimis daahitaan ka yar kaqeybgalayaasha ka aamusay cuntada ay jecelyihiin. Raadinta waxay soo jeedineysaa in sawir-gacmeedka internetka uu yahay abaalmarin galmo oo gacan ka geysata dib-u-dhigista dhimista si ka duwan abaalmarinta kale ee dabiiciga ah. Saamaynta aragtida iyo daaweynta ee daraasaddan ayaa la muujiyey.
Sheygan waxaa laga yaabaa inuu ka danbeeyo mushahar bixinta halkan. Eeg Sideen ku heli karaa baaritaanka? talooyin ku saabsan helitaanka.
Ng JYS, Wong ML, Chan RKW, Sen P, Chio MTW, iyo Koh D Kala duwanaanta jinsiga ee ku lug leh cilaaqaadyada la xidhiidha ciladda afka hooyo ee dhallinyarada qaniga ah in Singapore ee AIDS-ka Waxbarashada iyo Ka-hortagga, 2015, Vol. 27, No. 4, pp. 373-385. doi: 10.1521 / as.2015.27.4.373. (Caafimaadka)
Iyadoo la adeegsanayo sahan isweydaaris ah, waxaan eegnay kala duwanaan la'aanta jinsiga ee baahsanaanta iyo isirrada la xidhiidha galmada dabiiciga ah ee qaangaarka ah ee ka qeybgalaya kaliya rugta caafimaadka STI ee Singapore. Xogta waxaa laga soo ururiyay 1035 dhallinyaro firfircoon oo jinsi ah oo da'doodu tahay 14 ilaa 19 oo lagu falanqeeyay isticmaalka Poisson regression. Ka-hortagga galmada ayaa ah 28%, iyada oo si aad ah uqaabilsan dumarka (32%) marka loo eego ragga (23%) weligeed ku hawlan. Falanqaynta isku dhafan ee kala duwan, arrimaha la xidhiidha galmada ee labadaba waxay ahaayeen galmo afka ah iyo kuwa aan uur qaadka ahayn ee galmada la soo dhaafay. Dumarka, galmada futada waxay la xiriirtay da 'da yar yar ee ugu horeysa ee galmada iyo kantaroolka dibadda ee la fahmo. Dumarka dhexdooda, waxay la xiriirtay dhibcaha kacaan badan iyo kalsooni la'aanta ah inay ka horjoogsadaan cadaadiska saaxiibada inay galmoodaan. Isticmaalka cinjirka dabacsanaantu waa 22% iyo 8% ragga iyo dumarka, siday u kala horreeyaan. Barnaamijyada kahortagga STI ee loogu talagalay dhalinyaradu waa inay wax ka qabtaan galmada dabada, waxay noqon kartaa jinsi gaar ah, oo waxay tixgelinaysaa sifooyinka shakhsiga shakhsi ahaaneed.
Maqaalka buuxa wuxuu ka danbeeyaa mushahar bixinta halkan. Eeg Sideen ku heli karaa baaritaanka? ? Wixii talo ah ee ku saabsan marin u helka
Peters ST, Bowen MT, Bohrer K, McGregor IS iyo Neumann ID Oxytocin waxay joojisaa isticmaalka ethanol iyo dopamine-ochologen-sababtoo ah xajmiga nukleus in Cilmi-baarista walxaha. Qodobka ugu horreeya ee lagu daabacay internetka: 25 January 2016, DOI: 10.1111 / adb.12362. (Xiriirrada)
Khamriga (EtOH) waa mid ka mid ah daroogooyinka ugu caansan ee loo isticmaalo maandooriyeyaasha waana mid si aad ah u waxyeelleeya. Si kastaba ha ahaatee, fursadaha daweynta ee hadda jira ee dhibaatooyinka khamriga isticmaala guud ahaan waxay leeyihiin waxtarka xadidan iyo liidashada bulshada dhexdeeda. Xaaladdan dhexdeeda, oxytocin neuropeptide (OXT) ayaa soo baxday iyada oo ah ikhtiyaari daaweyn oo suurtagal ah in la daaweeyo cuduro badan oo isticmaalka walxaha, oo ay ku jiraan khamriga. Isticmaalka OXT ee yaraynta isticmaalka iyo xiisa gelinta maadooyin badan oo kala duwan ayaa laga yaabaa inay ku dheehantahay karti u leh inay wax ka beddesho saameynta daroogada ee daroogada ku jirta ee ku jirta dariiqa dopamine mesolimbic. Si kastaba ha ahaatee, saameynta OXT ee ficillada EtOH ee wadadani wali lama raadin. Halkaan, waxaan soo bandhignay in fayruuska 'intracerebroventricular (icv) ee' OXT '(1 μg / 5 μl) uu isku dardar-galiyey iskaa-wax-u-qabsiga' EtOH '(20 boqolkiiba) ka dib markii uu si joogto ah u dhexgalo EtOH for 59 maalmaha 28 (1.5 fadhiyada khamriga) ee jinsiga labka ah ee Wistar. Marka xigta, waxaan soo bandhignay in cirridka la yareeyey (IP) ee EtOH (15 g / kg, 10 boqolkiiba w / v) korodhka dopamine ee sii kordhaya ee nucleus galbeedka labadaba labadaba oo ah labadii EtOH iyo jiirka kuwaas oo heley XNUMX maalin kasta IP . Icv OXT waxay si buuxda u xakamaysay dopamine EtOH-sababtoo ah labadaba EtOH iyo jiiraan si joogto ah loo daweeyey. Kordhinta Dhoofinta Dopamine-ka ee OXT ayaa laga yaabaa inay ka caawiso sharraxaadda hoos u dhigidda is-bedelka EtOH ee ku-oolka ah kadib soo-saarka oXT OXT.
Fiiri xaashida buuxda halkan. Sheygan waxaa laga yaabaa inuu ka danbeeyo mushahar bixinta. Eeg Sideen ku heli karaa baaritaanka? talooyin ku saabsan helitaanka.
Pizzol, D., Bertoldo, A., & Foresta, C. Dhalinyarada iyo porno webka: xilli cusub ee jinsi ahaaneed in Wargeyska Caalamiga ah ee Daaweynta Dhalinyarada iyo Caafimaadka Aug 7 2015. pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2015-0003/ijamh-2015-0003.xml. doi: 10.1515 / ijamh-2015-0003. (Caafimaadka)
LIISKA: Pornography waxay saameyn kartaa hab-nololeedka dhallinyarada, gaar ahaan marka la eego dabeecadahooda galmada iyo isticmaalka jaahwareerka, waxaana laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan dabeecadahooda iyo dabeecadahooda.
Ujeedada: Ujeedada daraasaddan waxay ahayd in la fahmo oo la falanqeeyo inta jeer, mudada, iyo garashada isticmaalka suufka internetka ee dhallinyarada Talyaaniga ee dhigta dugsiga sare.
WAXYAABAHA IYO QAABOOYINKA: Wadar ahaan 1,565 arday oo dhigata sanadka ugu dambeeya dugsiga sare ayaa ku lug lahaa daraasadda, 1,492 ayaa ogolaaday inay buuxiyaan daraasad aan la aqoon. Su'aalaha matalaya nuxurka daraasaddan waxay ahaayeen: 1) Immisa jeer ayaad galaysaa shabakadda? 2) Waqti intee le'eg ayaad ku xirnaan doontaa? 3) Miyaad ku xirmaan boggaga qaawan? 4) Immisa jeer ayaad galaysaa bogagga qaawan? 5) Waqti intee le'eg ayaad ku qaadataa iyaga? 6) Immisa jeer ayaad siigaysataa? iyo 7) Sideed u qiimeysaa imaatinka degelladan? Falanqaynta tirakoobka waxaa sameeyay tijaabada Fischer.
Natiijooyinka: Dhamaan dadka dhalinyarada ah, maalin kasta waxay ku xiran yihiin internetka. 1,163 (77.9%) ee isticmaalayaasha Internetka ayaa qiray isticmaalka qalabka filimada, kuwan oo ah, 93 (8%) marin-u-helka shabakadaha websaydka, 686 (59%) wiilasha helaya goobahan waxay u arkaan isticmaalka sarkhaantiga sida had iyo jeer 255 (21.9%) waxay ku qeexdaa sida caadada ah, 116 (10%) waxay sheegeysaa in ay yareyso xiisaha galmada ee la-hawlgalayaasha dhabta ah ee nolosha, iyo 106 (9.1%) ee soo hadhay nooc ka mid ah takoorka. Intaa waxaa dheer, 19%% macaamiisha qaawan ee guud ahaanba waxay soo sheegaan jawaab galmo aan caadi ahayn, halka boqolkiiba ay kor ugu kacday 25.1 boqolkiiba macaamiisha caadiga ah.
XUSUUS: Waxaa lagama maarmaan ah in wax lagu baro dadka isticmaala internetka, gaar ahaan kuwa yaryar, isticmaalka ammaanka iyo isticmaalka internetka iyo waxyaabaha ku jira. Intaa waxaa dheer, ololaha waxbarashada dadweynaha waa in lagu kordhiyaa tirada iyo joogtada si loo caawiyo wanaajinta aqoonta ku saabsan arrimaha galmada la xiriira ee internetka labadaba iyo dhallinyarada.
Maqaalka buuxa wuxuu ka danbeeyaa mushahar bixinta halkan. Eeg Sideen ku heli karaa baaritaanka? Wixii talo ah ee ku saabsan helitaanka.
Postman N iyo Postman A (Horudhac) Isku Diidid Nafteena Dhimashada: Doodwadaha Dadweynaha ee Da'da Tusmada Ganacsiga Waraaqda dib u daabicidda, 20th Anniversary Edition, boggaga 208 2005 ee Buugaagta Penguin (ugu horeysay ee la daabacay 1985). ISBN 014303653X (ISBN13: 9780143036531) (Lahaansho)
Markii ugu horreysay ee lagu daabacay 1985, Neil Postman ayaa ka soo horjeeda naxdinta qarxa ee ku saabsan saamaynta dhirta ee telefishanka ku saabsan siyaasadeenna iyo ra'yiga dadwaynaha ayaa lagu amaanay buugii qarnigii labaatanaad ee la daabacay qarnigii labaatanaad. Hadda, telifishinadu waxay ku biiraan warbaahinta elektaroonigga ah ee casriga ah - laga soo bilaabo internetka ilaa tilifoonnada gacanta iyo DVD-waxa ay qaadatay muhiimad aad u weyn. Aragtida naga go'an inaan geeridu waa aragti nebiyadeed oo ah waxa dhaca marka la eego siyaasadda, saxaafadda, waxbarashada, iyo xitaa diinta inay noqoto mid ku xiran baahida madadaalada. Sidoo kale waa qorshe dib-u-helidda xakameynta wariyeyaasheenna, si ay ugu adeegaan yoolalka ugu sarreeya.
Pratt R. iyo Fernandes C Sidee Pornography ay u Dhici Kartid Qiimeynta Khatarta Carruurta iyo Dadka Waaweyn ee Rabshadaha Jinsiga ah in Carruurta Australia, Volume 40 Issue 03, September 2015, pp 232-241. DOI: 10.1017 / CHa.2015.28. (Caafimaadka)
Soddonkii sano ee la soo dhaafey, "la siiyaa" qiimeynta dabeecadaha xadgudubka galmada ee qaangaarka ah iyo daaweyntu waxay ahayd in ficillada galmada ee ka sii daran ay sii kordhaan, in badan oo ku sii xidideysa in dabeecadaha qaangaarka ay u badan tahay inay noqdaan, iyadoo laga yaabo inay ka soo baxaan weerarada yaryar ilaa ficillo ka sii daran, oo faragelin ah. Waxaan u maleyneynaa in dhalinyarada ku mashquulsan dabeecada xadgudubka galmada ay noqon karto labadaba kuwa aan u qalmin waxyeelada ay geysanayaan, iyadoo loo baahan yahay in lagu lug yeesho dambiyo aad u daran si loo helo heerka kacsiga asal ahaan lagu gaarey ficillada yaryar. Fikirkaan fekerka ahi wuxuu soo jeedinayaa xiriir xoogaa sababa oo udhaxeeya muddada dabeecada xadgudubka galmada; darnaanta anshaxa iyo dhererka daaweynta loo baahan yahay si loo maareeyo loona daaweeyo arrinta.
Isticmaalka pornography wuxuu saameyn ku yeelan karaa qiimeynta iyo daaweynta dhalinyarada kufsiga galmada? Miyuu xidhiidhku ka dhexmaryahay darnaanta iyo sii wadista falalka galmoodka ah ee geystay, ama uu daawaday filimmo iyo dib-u-samaynta wixii la arkay bedelay xidhiidhkan? Maqaalkani wuxuu sahamiyaa tiro mowduucyo ah iyo su'aalahan.
Maqaalka buuxa wuxuu ka danbeeyaa mushahar bixinta halkan. Eeg Sideen ku heli karaa baaritaanka? talooyin ku saabsan helitaanka.
Reid RC, Davtian M, Lenartowicz A, Torrevillas RM, Fong TW Xogta ku saabsan qiimeynta iyo daaweynta ADHD qaangaar ah ee dadka ragga ah in Nooca maskaxda. 2013 Jun 1; 3 (3): 295-308. (Guriga)
Maqaalkani wuxuu dib u eegayaa jiritaanka cilmi baarista ku saabsan ADHD qaangaarka ah iyo dabeecadaha cakiran. Sawirada muuqaalka laga soo qaaday beeraha cilmi nafsiga iyo neerfiyoolojiga, dhowr talooyin ayaa la bixiyaa si ay u sharaxaan sababta shaqsiyaadka qaba ADHD ay u nugul yihiin in ay ku lug yeeshaan dabeecadaha ciriiriga. Tilmaamaha qiimaynta ayaa la siiyaa si ay u caawiyaan rugaha caafimaadku waxay kala saari karaan sifooyinka faraha badan ee ADHD. Ugu dambeyntii, talooyinka waxaa loo sameeyaa daaweynta ADHD qaangaarka ah ee dadka bukaanka ah.
Shayer, M., Ginsburg, D. iyo Coe, R, Soddon sano kadib - saameyn weyn oo anti-Flynn ah? Tijaabada Piagetian Volume & Culaysyada xeerarka 1975 - 2003. Joornaalka Ingiriiska ee cilmu-nafsiga waxbarashada, 2007, 77: 25-41. doi: 10.1348 / 000709906X96987
Gundhig Qiyaasta & Culayska ayaa ka mid ahaa seddex tijaabo oo Piagetian ah oo loo adeegsaday sahaminta CSMS ee 1975/76. Si kastaba ha noqotee si ka duwan tijaabooyinka cilmu-nafsiga ee muujinaya saameynta Flynn - taasi waxay la socotaa ardayda oo muujineysa horumar joogto ah sannadba sanadka ka dambeeya ee u baahan imtixaannada in dib loo cusbooneysiiyo - waxay umuuqatay in waxqabadka ardayda Y7 uu dhawaanahanba si isdaba-joog ah uga sii darayay.
Himilooyinka. Muunad ka mid ah dugsiyada ayaa ku filan oo ballaaran oo wakiil ah ayaa la doortay si ay u noqoto mid muujinaysa waxqabadka sii xumaanaya, waxaana lagu qiyaasi karaa tiro ahaan.
Muunad Lixdan iyo sagaal Y7 kooxo sanad dugsiyeed oo ay kujiraan xog ardayeed oo ku saabsan Imtixaanka Culeyska & Culeyska iyo Jaamacadda Durham CEM Center MidYIS ayaa ku yaalay iyagoo bixinaya muunad 10, 023 arday ah oo daboolaya sanadihii 2000 ilaa 2003.
Habka. Dib u soo celinta iskuulka ardaydu waxay ka dhigan tahay mugga iyo culeyska iskuulka celcelis ahaan dhibcaha midaysan, iyo xisaabinta dib u dhaca ku yimid MidYS = 1999 wuxuu ogolaanayaa isbarbardhigga wixii la helay 100.
Natiijooyinka. Celceliska dhibcaha dhibcaha laga bilaabo 1976 ilaa 2003 waxay ahaayeen wiilal = 1.13 iyo gabdho = 0.6 heerar. Farqiga udhaxeeya heerka 0.50 leex leexashada ee wiilasha 1976 ayaa gebi ahaanba lawaayay sanadka markuu ahaa 2002. Intii udhaxaysay 1976 iyo 2003 saamaynta-cabirka hoos u dhaca ku yimid waxqabadka wiilasha wuxuu ahaa 1.04 qaloocsanaanta heerka, gabdhuhuna waxay ahaayeen 0.55 heerka leexashada.
Gabagabo. Fikradda ah in caruurtu ka baxaan dugsiga hoose waxay helayaan xog badan oo caqli badan oo karti leh - haddii ay tahay mid loo fiiriyo saameynta Flynn, ama marka la eego tirakoobka xisaabeed ee waxqabadka Key Stage 2 SATS ee xisaabta iyo sayniska - waxaa su'aasha la weydiinayaa Natiijooyinkan.
Singleton O, Hölzel BK, Vangel M, Brach N, Carmody J iyo Lazar SW. Isbeddelka Naqshadda Cilmi-Baadhista ee Grain Nidaamka Ka-Hor-tagga Dhaq-dhaqaaqa Dhex-dhexaadku wuxuu la xidhiidhaa Hagaajinta Xeeladaha Cilmi-nafsiga in Xuduudaha Xuurnimada Aadanaha, 2014 Feb 18; 8: 33. doi: 10.3389 / fnhum.2014.00033. (Joogitaanka Porn)
Shakhsiyaadka waxay hagaajin karaan heerkooda nafsiyaadka nafsiga (PWB) iyada oo loo marayo isticmaalka waxqabadyada nafsaaniga ah, oo ay ka mid yihiin farsameynta fikradda fikirka, taas oo lagu qeexay wacyigelinta aan wacyigelinta ee khibradaha waqtigan xaadirka ah. Waxaan dhawaan ku soo warramey in koorsada 8-ku yaraanta cadaadiska yar-yar (MBSR) ay horseedi karto kor u kaca maaddada muraayadaha ee dhowr meelood oo maskaxda ah, sida lagu ogaado miyaliga ku salaysan voxel-ka ee miisaaniyeynta diyaar-gareynta degdegga ah ee dareenka degdega ah ee echo MRI scan, oo ay ka mid yihiin boogaha / raphe / area coeruleus ee nidaamka maskaxda. Iyadoo la tixgelinayo doorka pons iyo raphe ee niyadda iyo arousal, waxaanu ku dhignaa in isbeddelka gobolka ee laga yaabo in uu hoos u dhaco isbeddel wanaagsan. Xubin ka tirsan 14 shakhsiyaadka caafimaadka leh ee ka soo horjeeda xogta hore ee la daabacay waxay dhammaystireen MRI anatomical iyo buuxiyey miisaanka PWB kahor iyo kadib markii ay MBSR kaqeybqaataan. Isbeddelka PWB waxaa loo isticmaalaa sidii uu ku-xigeenka ku-beddelashada isbeddelka cufnaanta maaddada caanka ah ee ku jirta gobollada maskaxda kuwaas oo horey u muujiyey isbeddel-ka-dib-is-beddelka MBSR. Natiijooyinka waxay muujiyeen in dhibcooyinka shan qiyaasood ee PWB iyo sidoo kale dhibcaha guud ee celceliska PWB ayaa si aad ah u kordhay kooraska MBSR. Isbeddelka ayaa si wacan u dhexmuuqday mawduucyada miisaanka culus ee kor u kaca laba kooxood oo isku-dhafan oo dhexdhexaad ah oo ku yaala maskaxda. Kooxahaasi waxay u muuqdaan inay ka kooban yihiin aagga pontine tegmentum, coeruleus locusum, nucleus raphe pontis, iyo nuklein trigeminal trigemus. Kooxo xayawaan ah ayaa si xun ula xiriirin isbedelka PWB. Daraasadan horudhac ah waxay soo jeedineysaa habdhiska neerfaha ee PWB. Meelaha maskaxda la aqoonsan yahay waxaa ka mid ah goobaha loo yaqaan "synthesis and release of neurotransmitters, norepinephrine and serotonin, kuwaas oo ku lug leh habdhaqanka dabeecadda iyo dabeecadda, waxaana lala xiriiriyay hawlo kala duwan oo kala duwan iyo sidoo kale xiriirro kiliinikada la xidhiidha.
Stewart DN, Szymanski DM Warbixinnada Dumar ee Da'yarta ee Waalidiinta Ragga ah ee Waalidiinta Jacaylka ah waxay u adeegsadaan sida isku dheelitiran ee isxukunkooda, tayada xiriirka, iyo qanacsanaanta galmada in Doorarka jinsiga. 2012 May 6; 67 (5-6): 257-71. (Guriga)
Pornography waa labadaba waana mid caadiyan ah dhaqammo badan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan dhaqanka Mareykanka; Si kastaba ha ahaatee, wax yar ayaa laga ogaadaa saamaynta maskaxeed iyo isudheellitirneed ee ay ku yeelan karto haweenka da'da yar ee ku lug leh xiriirka jinsiga ah ee jacaylka ah ee ay lamaanayaashoodu u arkaan sawirro. Ulajeedada daraasaddan waxay ahayd in la baaro xiriirka ka dhexeeya isticmaalka suuqyada ragga, isticmaalka marwalba iyo isticmaalka dhibaatada, kufsiga haweeneyda hijroolka ah ee fayadhowrka iyo isfahamsanaanta ka dhexjirta 308 dumarka kuleejka dhalinyarada. Intaas waxaa sii dheer, guryaha nafsiga ah ee loogu talagalay Iskuduwaha Isticmaalka Waalidka ee Maskaxda leh ee Lahaanshaha. Ka qaybgalayaasha waxaa lagu qoray jaamacad ku taalla koonfurta magaalada weyn ee Maraykanka waxayna dhamaysay sahan online ah. Natiijooyinka ayaa lagu soo bandhigay warbixinnada haweenka ee isticmaalka lamaanaha sawirada ee fara xumeynta ayaa si xun loola xiriiriyay tayada xidhiidhkooda. Fikrado badan oo ka mid ah isticmaalka maskaxda ee khatarta ah ayaa si khaldan loo xushay kalsoonida, tayada xidhiidhka, iyo qanacsanaanta jinsiga. Intaa waxaa dheer, kalsoonidu waxay qayb ahaan dhexdhexaadinaysaa xiriirka u dhaxeeya aragtida lamaanaha dhibaatada maskaxda ee dhibaatada leh iyo tayada xiriirka. Ugu dambeyntiina, natiijooyinka ayaa shaaca ka qaaday in dhererka xiriirka uu dhexdhexaadiyay xiriirka u dhaxeeya aragtida lamaanaha dhibaatada ee maskaxda iyo dhibaatada jinsiga, iyada oo ku qanacsanaan la'aanta ah oo la xiriirta dhererka xiriirka dheer.
Sun C, Bridges A, Johnason J iyo Ezzell M Pornography iyo Man Labeecada Galmada: Falanqaynta Isticmaalka iyo Xiriirrada Galmada in Arbiyada Habdhaqanka Galmada Marka hore online: 03 December 2014, pp 1-12. (Caafimaadka)
Pornography waxay noqotey ilal muhiim u ah waxbarashada galmada. Isla mar ahaantaana, pornography ganacsiga caadiga ah ayaa ka dhexjiray qoraal qeexan oo ku saabsan rabshad iyo gumaysi dumar ah. Hase yeeshee, shaqo yar ayaa la sameeyey iyada oo sahaminta ururrada ka dhexjeeda filimmada iyo galmada jaahwareerka ah: Doorka doorka uu ka qabo pornography ayaa ka dhex muuqda galmo dhab ah oo u dhexeeya nin iyo naag? Qorshaha fahamka qoraalka ah ayaa ku doodaya qoraallada warbaahinta inay abuuraan qaab fudud oo la heli karo oo lagu gaaro go'aaminta. Inta badan isticmaalaha ayaa daawanaya qoraal warbaahineed oo khaas ah, codsiyadaas badan ee codsigoodu waxay noqdaan kuwo adduunkooda ah waxayna u badan tahay inay isticmaalaan qoraalladan si ay u dhaqmaan khibradaha nolosha dhabta ah. Waxaan ku doodi karnaa fara-xuruufisku wuxuu abuuraa qoris galmo oo markaa hagaya khibradaha jinsiga. Si aan u tijaabinno, waxaanu daraasadeynay rag ka tirsan jaamacadda 487 (da'doodu tahay 18-29 sano) oo Maraykanka ah si loogu barbardhigo heerka xaddiga filimmada ee isticmaalka galmada iyo dareenka. Natiijooyinka ayaa muujinaya sawirro badan oo ka muuqda filimka nin, wuxuu u badan yahay inuu u adeegsado inta lagu jiro galmada, isaga oo ka codsanaya ficilada galmada jinsiga ah ee asxaabtiisa, isaga oo si ula kac ah u dhaleeceynaya sawirada filimada sawirrada inta uu jinsiga ku jiro si uu u ilaaliyo arousal, iyo inuu ka welwelo waxqabadkiisa jimicsiga iyo jirkiisa sawir. Dheeraad ah, isticmaalka daroogada sare ee sarreysa ayaa si xun loola xiriiriyay inuu ku raaxaysto dabeecadaha isdaba-joogga ah ee galmada la leh lamaane. Waxaan soo gabagabeyneynaa in pornography uu keeno qaab-dhismeed xoogan oo xooggan oo ku lug leh raga iyo dabeecadaha ragga inta lagu jiro galmoodka.
Sun C, Miezan E, Lee NY iyo Shim JW Korean Pornography ayaa isticmaala, Rabitaankooda ku saabsan Pornography, iyo Dyadic Xiriirrada Galmada in Wargeyska Caalamiga ah ee Caafimaadka Galmada, Volume 27, Issue 1, 2015 bogagga 16-35. DOI: 10.1080 / 19317611.2014.927048 Lifaaqa internetka: 20 Nov 2014. (Caafimaadka)
Ujeeddooyinka: Ujeedada daraasaddan waxay ahayd in la qiimeeyo xiriirka ka dhexeeya isticmaalka pornography (labadaba marxaladdan iyo xiisaha maskaxdooda ba'an) iyo xidhiidhada galmada ee dyadiga. Hababka: Lixda boqol-iyo-siddeetan-shan ee hoomada ah ee ardayda Koonfurta Kuuriyaanka ee koonfurta Kuuriya ayaa ka qaybqaatay sahan online ah. Natiijooyinka: Inta badan jawaabaha (84.5%) ee dadka soo jawaabay waxay arkeen filimmo, iyo kuwa jinsi ahaan firfircoon (470 jawaabeyaasha), waxaan ogaanay in xiisaha sare ee sharaf-rididda ama fara-xareedka badani ay la xiriirtay waayo-aragnimada jilayaasha jinsiga ka soo jeeda jinsiga lammaane, iyo doorbidinta isticmaalka filimada sawir-qaadista si loo gaadho loona ilaaliyo farxada galmada ee galmada la leh lamaanaha. Gabagabadii: Natiijooyinka waxay ahaayeen kuwo isku mid ah laakiin leh faraqyo daraasaddan oo Maraykan ah oo leh qaab isku mid ah, oo tilmaamaya in dareenka la siiyo khilaafaadka dhaqameed.
Sutton KS, Stratton N, Pytyck J, Kolla NJ, Cantor JM Astaamaha bukaanka ah ee loo yaqaan 'Hypersexuality Referral': Dib-u-eegis Daahfadeed Qiyaasta 115 in J Jirrada guurka galmada. 2015 Dec;41(6):563–80. (Home)
Cilad-darrada ayaa weli ah cabasho bukaan-socod oo caadi ah oo aan fiicnayn. Inkastoo ay kala duwan yihiin kiliinikada daaweynta ee bukaanada loo yaqaan hypersexuality, suugaanta ayaa haya habab daaweyneed oo loo maleynayo in ay khuseyso dhammaan dhacdooyinka. Habkani waxa uu xaqiijiyay waxtar lahayn, inkastoo codsigiisi ka badan tobaneeyo sano. Daraasadani waxay isticmaashay habab qiimeyn ah oo lagu baadho naafonimada, caafimaadka maskaxda, iyo xiriirka jinsi ahaaneed ee qaybaha caadiga ah ee bukaan-socodka ee u gudbinta gudbinta. Natiijadu waxay taageertaa jiritaanka subtypes, mid kasta oo leh noocyo kala duwan oo ah qaababka. Farshaxanimada 'hypertextuals' ayaa ku soo warramey tiro badan oo ka mid ah lamaanayaasha galmada, xad-dhaafka mukhaadaraadka, bilaabida hawlaha galmada ee da'da hore, iyo sheeko xoojin ah oo ka dambeysa dabeecadooda galmada. Masturbo-bixiyayaashu waxay sheegeen inay jiraan heerar badan oo walaac ah, dib-u-dhac ku yimid, iyo isticmaalka jinsiga sida istaraatiijiyad ka fogaansho. Dhillaaariyeyaasha joogtada ah ayaa soo sheegey in biyo yaraanta la yiraahdo iyo kadib markii bilawga ah ee qaangaadhka. Bukaanada loo qoondeeyey waxay u badnaayeen inay soo sheegaan xadgudubka maandooriyaha, shaqada, ama dhibaatooyinka maaliyadeed. Inkasta oo miisaaniyaddan, qodobkani waxa uu soo bandhigayaa daraasad sharraxeed oo ku salaysan qaabka hoose ee ka muuqda muuqaalada ugu badan ee qiimaynta jinsiga caadiga ah. Daraasadaha mustaqbalka waxay ku dabaqi karaan farsamooyinka tirakoobka, oo ay ka mid yihiin falanqaynta kooxeed, si loo ogaado inta ay le'eg tahay noocyada isku midka ah ee la midka ah marka la eego qadarin.
Qoraalkan ayaa la heli karaa halkan.
Svedin CG, Åkerman I iyo Priebe G Isticmaalayaal badan oo ka mid ah filimmada. Daraasad cilmi baaris ah oo ku salaysan cilmi-baaris ku salaysan dhalinyarada da'da yar ee iswiidhishka ah in Wargeyska Waalidka, Volume 34, Issue 4, August 2011, Pages 779-788. doi: 10.1016 / j.adolescence.2010.04.010. (Caafimaadka)
Isticmaalka sawir-gacmeedka si joogto ah looma ogalaanin kahor. Baadhitaan iswiidhish ah 2015 da'da ardayda da'da 18 ayaa ka qaybqaatay. Koox ka mid ah dadka isticmaala filimka (N = 200, 10.5%) ayaa la baranayey iyada oo la tixraacayo asalka iyo xidhiidhka nafsaaniga ah. Isticmaalayaasha soo noqnoqda waxay yeeshaan dabeecad wanaagsan oo loogu talagalay filimmo, waxay badanaaba "u jeesteen" aragti sawir daroogo ah waxayna u ekaatay qaabab badan oo siyaado ah. Isticmaalka joogtada ah ayaa sidoo kale lala xiriiriyay dabeecado badan oo khatar ah. Daraasad isdabajoog ah oo badan oo farsamo ayaa muujisay in dadka badanaa isticmaala filimada sawirada ay u badan tahay inay ku noolaadaan magaalo weyn, oo khamriga marar badan isticmaala, rabitaan galmo oo aad u badan, oo intaa ka badan iibsaday jinsi ahaan wiilasha kale ee isku da'da ah.
Kala-fiirsashada joogtada ah ee fara-xumeynta ayaa loo arkaa inay tahay dabeecad dhibaato leh oo u baahan in badan oo ka socota labada waalid iyo macalimiinta iyo sidoo kale in lagu xalliyo wareysiyada daaweynta.
Valliant, GE Guulaha waayo-aragnimada: Daraasaadka Ragga ee Harvard Grant. 2012 Harvard University Press. ISBN 9780674059825. (Xiriirrada)
Buugga daabacaadda ee daabacaadda
Waqtiga ay dad badan oo adduunka ah ku nool yihiin tobankoodii tobnaad, daraasadda ugu dheer ee horumarinta bani'aadamnimadu marwalba waxay soo bandhigtay qaar ka mid ah wargeysyada soo dhaweynta ah ee da 'cusub: nolosheenu waxay sii wadi doonaan isbeddelka sanadaha dambe, badanaaba intii ka horeysay.
Waxay bilaabantay 1938, Daraasada Deeqda ee Horumarka Dadka Weyn waxay muujisay caafimaadka jidheed iyo shucuureed ee ka sarreeya ragga 200, oo ka bilaabanaya maalmaha shahaadadooda. Nidaamka La qabsashada Nolosha ee hadda waa la soo sheegay oo ku saabsan nolosha ragga ilaa da'da 55 waxayna naga caawisay inaan fahanno qaangaarka koritaanka. Hadda George Vaillant ayaa raacaya nimankooda sagaal sano, markii ugu horeysay ee la diiwaangeliyo waxa ay u egtahay in ay ka soo raynayso hawlgab caadi ah.
Ka warbixinta dhammaan dhinacyada nolosha labka ah, oo ay ka mid yihiin xiriirka, siyaasadda iyo diinta, istaraatijiyadaha la qabsiga, iyo isticmaalka qamriga (xadgudubkeedu wuxuu noqon karaa midka ugu weyn ee caafimaadka iyo farxada maadooyinka daraasadda), Guulaha waayo-aragnimada waxay la wadaagaan tiro badan oo ah natiijooyin la yaab leh. Tusaale ahaan, dadka si wanaagsan u shaqeynaya da 'wayn ma ahan inay si fiican u sameeyaan bartamaha nolosha, iyo waliba dhinaca kale. Inkastoo daraasaddu ay xaqiijinayso in ka soo kabashada ilmanimada caruurnimadu ay suurtagal tahay, xasuusinta ilmanimada farxadda leh waa ili nololeed oo nolol dheer leh. Jinsiyadu waxay keenaan waxyaalo badan oo ka badan da'da 70, iyo da'da jireed ka dib 80 waxaa lagu go'aamiyey in yareynayo caaqilka marka loo eego caadooyinka la sameeyey ka hor da'da 50. Heerka korriinshaha qaangaarka iyo isfahamnimada, waxay u egtahay, in badanaa nafteena ka sii badan marka loo eego qurxinta naaskeena.
Voon V, Mole TB, Banca P, Porter L, Morris L, Mitchell S, et al. Nuural Dhexdhexaad ah ee Cunto-celinta Cudurrada Galmada Shakhsiyaadka leh oo aan lahayn Dabeecad-Galmo Isku-Digniin ah in KA HELI KARO. : 2014 Jul 11; 9 (7): e102419. (Guriga)
Inkastoo habdhaqanka galmada ee qasabka ah (CSB) loo maleynayo inay tahay "qabteyn" anshaxeed iyo xajmiga neerfaha ee caadiga ah ama iskuulada ah ayaa laga yaabaa in ay xukumaan habka waxtarrada dabiiciga ah iyo daroogada, wax yar ayaa la ogyahay oo ku saabsan jawaabaha qalabka muuqda ee galmada shakhsiyaadka leh iyo aan lahayn CSB. Halkan, habka loo adeegsanayo waxyaallaha kala duwan ee jinsiga ayaa lagu qiimeeyaa shakhsiyaadka leh ama aan lahayn CSB, oo diiradda saaraya gobollada neuralada ee lagu ogaaday baadhitaano hore ee daaweynta cuna-qabatinka. 19 Maaddooyinka CSB iyo mutadawiciinta caafimaadka ee 19 ayaa lagu qiimeeyay iyada oo la adeegsanayo MRI ficil ahaan loo barbar dhigo fiidiyowyo cadcad oo galmo ah oo aan la isticmaalin fiidiyowyo aan xiiso gal ahayn. Qiimeynta rabitaanka galmada iyo liki ayaa la helay. Xidhiidhka mutadawiciinta caafimaadka leh, maadooyinka CSB waxay leeyihiin rabitaan ballaaran laakiin dhibco isku mid ah oo la mid ah oo ka jawaab celinaya fiidiyowyada muujinaya galmada. Ku-soo-jeeda galmada calaamadaha galmada ee CSB marka la barbar dhigo maaddooyinka aan CSB ahayn waxay la xidhiidhaan waxqabadka gogol-xajinta qeeybta hore, ceegaaga vangel iyo amygdala. Isku xirnaanta waxqabadka ee shabakada canshuur-gareenta-tooska ah ee isku-xigta ciyariga-amygdala waxay la xiriirtay rabitaan jinsi ah (laakiinse aan jecleyn) in ka badan maadada CSB marka loo eego maaddooyinka aan CSB ahayn. Kala saarista u dhaxaysa rabitaanka ama rabitaanka iyo jeclaanta waxay la socotaa fikradaha dhiirigelinta dhiirigelinta CSB sida ku jirta daroogada daroogada. Farqiga nukliyeerka ee habka falcelinta fal-celinta jinsiga-cuna waxa lagu qeexay maaddooyinka CSB ee gobollada horay loogu soo qoray cilmibaarista fal-dambiyeedka. Ka qayb qaadashada ballaaran ee wareegga wareegga cudurrada corticostriatal ee CSB ka dib markii lagu soo rogay amarrada galmada waxay muujinaysaa hababka neerfaha ee CSB iyo bartilmaameedyada bayoolojiga ah ee waxqabadyada.
Weaver JB, Weaver SS, Mays D, Hopkins GL, Kannenberg W, McBride D Tilmaamaha caafimaadka maskaxda iyo jireed iyo dabeecadda isticmaalka saxda ah ee galmada ee dadka waaweyn in Wargeyska Daaweynta Jinsiga. 2011 Mar;8(3):764–72.
HORDHAC: Isku dhafidda caddaynta ka soo jeeda dhaqammo kala duwan ayaa muujinaya in dabeecadaha isticmaalka saxda ah ee galmada (SEMB), sida isticmaalka filimada sawir qaadashada) ay la xiriirto aragtida caafimaadka galmada iyo dabeecadaha khatarta leh, badanaa oo ku lug leh khatarta sare ee gudbinta HIV / STD.
AIM: Asal ahaan wax aan la fahmin, iyo diiradda halkan, waa xidhiidhada ka dhexeeya SEMB iyo tilmaamaha caafimaadka maskaxda-jirka iyo caafimaadka jirka.
QIIMEYNTA WAXBARASHADA DARYEELKA: Waxyeelaynta lixda calaamadood ee caafimaad oo joogto ah (calaamadaha niyadjabka, maskaxda iyo jidhka-caafimaadka ayaa yaraaday, xaalad caafimaad, tayada nolosha, iyo qiyaasta culeyska jirka) ayaa lagu baarey laba heer (kuwa isticmaala, kuwa aan haysan) ee SEMB.
QODOBBALADA: Tusaale ahaan 559 Seattle-Tacoma Internet-isticmaalaya dadka qaan-gaarka ah ayaa lagu daraaseeyay 2006. Noocyada qaaska ah ee isku dhafan oo lagu qiimeeyo SEMB oo ay soo diyaariyeen jinsiga jawaabta (2 × 2) waxaa lagu qeexay is-beddelaad loogu talagalay dadyaweyn tiro badan.
Natiijooyinka: SEMB waxaa lagu soo wariyay 36.7% (n = 205) ee tusaalaha. Inta badan dadka isticmaala SEMB (78%) waxay ahaayeen rag. Ka dib markii la isku hagaajiyo dadka naafada ah, dadka isticmaala SEMB, marka la barbardhigo dadka aan korin, waxay muujiyeen calaamadaha niyadjabka, tayada nolosha oo liita, maskaxiyan jireed iyo jidheed-yar oo yaraaday, iyo xaalad caafimaad oo hooseeysa.
Gunaanad: Natiijooyinka waxay muujinayaan in tilmaamayaasha caafimaadka maskaxda iyo jireed ay si weyn ugu kala duwan yihiin guud ahaan SEMB, iyagoo soo jeedinaya qiimaha lagu darayo qodobadan cilmi baarista mustaqbalka iyo dadaallada barnaamijyada. Gaar ahaan, natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in istiraatiijiyadaha dhiirrigelinta caafimaadka galmada ee caddaynta ku saleysan isla mar ahaantaana wax looga qabanayo shakhsiyaadka 'SEMB' iyo baahiyahooda caafimaadka maskaxda ay noqon karaan habab waxtar leh oo lagu hagaajinayo caafimaadka maskaxda iyo wax ka qabashada natiijooyinka caafimaadka galmada ee laga hortegi karo ee la xiriira SEMB.
Weber M, Quiring O iyo Daschmann G Peers, Waalidiinta iyo Pornography: Raadinta Kacliinta Dadka Waaweyn ee Maqnaanshaha Qalabka Muujinta Jinsiga ah iyo Horumarka Koritaanka in Galmada & Dhaqanka, December 2012, Volume 16, Issue 4, pp 408-427. (Caafimaadka)
Iyadoo lagu saleynayo sahan online ah oo loogu talagalay dhalinyarada 352 ee da'doodu u dhaxayso 16 iyo 19, isticmaalka fiidiyowga fiidiyowga iyo filimada sawirrada ayaa la baaray iyada oo lala xiriirinayo xiriirka u dhexeeya isticmaalka iyo tilmaamayaasha qaangaarka ee 'ogyihiin madax-bannaanida', saameyn kooxeed, iyo fikradaha jinsiga. Waxaan ogaanay in dhalinyaro badani ay si joogto ah u isticmaalaan fiidiyowga fiidiyowga ama filimada. Jawaab celiyeyaasha naftooda u tixgeliya sida ka madax banaan bay'adooda, khaasatan waalidiintooda, waxay si isdaba joog ah u isticmaalaan sawirro. Gabdhaha, tani waxay sidoo kale khusaysaa haddii ay qiimeynayaan isticmaalka kooxahooda ayagoo si gaar ah u eegaya, iyo wiilasha, haddii ay si joogta ah ugala hadlaan pornography ee kooxahooda. Heerka sarreeya ee isticmaalka warbaahin si cad u jinsiga ah ayaa sidoo kale gacanta ku haysa iyada oo loo maleeynayo in dadku guud ahaan galmo galmo horay ugu nool yihiin iyo in dadku guud ahaan farsamooyin fara badan oo kala duwan.
Wilson, Gary 2014 Maskaxdaada Maskaxda: Pornography Internet iyo Sii-saarka Soogalootiga, Daabacaadda Dawlada Dhexe ISBN 978-0-9931616-0-5
"Your Brain on Porn waxaa lagu qoraa luqad fudud oo ku habboon khabiir iyo xirfadlaha oo si isku mid ah loona xakumay mabaadii'da qanjidhada, dabeecadda cilmi nafsiga iyo aragtida kobcinta ... Sida cilmi nafsiga cilmi nafsi ahaaneed, waxaan ku qaatay afartan sano oo cilmi baaris ah waxaana xaqiijin karaa in falanqaynta Wilson ay aad ugu fiican tahay dhamaan wixii aan helay. "
Professor Frederick Toates, Jaamacadda Furan, oo ah qoraaga Howlaha Hawsha Haweenka: Ujeedada Cilmi-baarista.
Laga heli karo iibka publisher.
Wright PJ, Sun C, Steffen NJ iyo Tokunaga RS Pornography, Alcohol, iyo Lab Hanjabaadda Galmada ee Maqaalada Isgaadhsiinta Qalabka 82, Issue 2, 2015 bogagga 252-270. La daabacay bogga: 19 Nov. 2014. DOI: 10.1080 / 03637751.2014.981558. (Caafimaadka)
Daraasadani waxay sahamisay xiisaha ragga iyo jinsiga ee Jarmalka iyo kaqeybgalka dabeecadaha kala duwan ee lagu yaqaan falanqaynta dhowaan ee filimada. Xiisaha loo qabo daawashada filimada qaawan ee foosha xun ama isticmaalka badan ee filimada qaawan ayaa lala xiriiriyay ragga rabitaankooda ah inay ku lug yeeshaan ama horeyba ugu lug yeesheen dabeecado sida timo jiidaya, dharbaaxida lammaanaha adag oo ku filan inuu ka tago calaamadda, dheecaanka wajiga, xiritaanka, laba-galitaanka ( yacni gelitaanka dabada ama siilka lammaanaha isla mar ahaantaana nin kale), dameer-ka-afka (yacni si caadi ah u dhex galista lammaanaha ka dibna guska si toos ah afkeeda u galiyo), cilad guska, wajiga oo dhirbaaxo, ceejis, iyo wicitaan (sida " jilicsan "ama" dhillo "). Iyadoo la raacayo cilmi-baaris tijaabo ah oo la soo dhaafay oo ku saabsan saameynta khamriga iyo fara-xumeynta soo-gaadhista ragga ee suurtagalnimada qasabka galmada, ragga ku hawlanaa dabeecadaha ugu badan ayaa ahaa kuwa si joogto ah u cabaya sawir-gacmeedka oo si joogto ah u caba khamriga kahor ama inta lagu jiro galmada.
Maqaalkani waa mid la heli karo si aad u aragto lacag la'aan halkan.